MACLUUMAADKA TARANKA CARLIN PINSCHER DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Carlin Pinscher Dog iyo Sawirro
Cambaro 2 sano jir ah
Sida laga soo xigtay American Canine Hybrid Club, Miniature Pinscher iyo iskutallaab Pug waxaa loo yaqaan Muggin. DBI waxay bartay noocyo kale oo loo maleynayo inay gacan ka geysan doonaan nooca Carlin Pinscher ayaa jiray, waxaana lagu soo bandhigayaa barkadda hidda-wadaha ee Carlin Pinscher iyadoo la isku dayayo in la abuuro nooc cusub. Sidaa darteed, waxaan kala soocnay Carlin Pinscher iyo Muggin. Magaca 'Muggin' waa waxa Naadiga isku dhafka ah ee loo yaqaan 'Canine Hybrid Club' uu ugu yeero iskutallaabta Pug / Min Pin. Haddii aad jeclaan lahayd inaad korsato mid ka mid ah eeydan oo aad doorbideyso nooca aad rabto, ka hor intaadan korsan, weydiiso soosaaraha nooca eyga ay tarmayaan, Muggin ama Carlin Pinscher.
Cunnooyinka soo koraya, Carlin Pinschers aad ayey isugu egyihiin muuqaal ahaan. Carlin Pinscher wax dhibaato ah oo xagga neefsashada ah kama haysato xaqiiqda ah inay haysato qaar ka mid ah muuska 'Miniature Pinscher'. Pugga wuxuu siiyay lugaha ka sii dhumuc weyn iyo jir muuqaal fiirinaya. Koodhku wuxuu la mid yahay kan gaaban, oo ku dhowaad aan daadin Guntin yar . Midabka loo abuurayo waa madow iyo madow.
Sida laga soo xigtay Isabeau, mid ka mid ah Carlin Pinscher kuwii hore ee soo-saareyaasha ahaa, 'Waxay yihiin dad dulqaad badan oo raaxo leh sida a Baabuur , 'inkasta oo ay weli hayaan qaar, laakiin dhammaantood ma ahan Guntinta Guntin dabeecadaha u eg terrier-ka. Tani waa nooc xitaa xanaaq badan, oo muujineysa xasilooni, ciyaar ciyaar, soo jiidasho weyn, sharaf, iyo dabeecad bax, kalgacal. Eeyaha badankood waxay la kiciyeen caruur ixtiraam leh oo yaqaana sida loo muujiyo hogaaminta eeyga, waxay u koraan eeyo xushmad leh, dabacsan. Tababbarka adeecida iyo hogaamiyaha baakadka adag ayaa ah mid looga baahan yahay eeyaha oo dhan, maadaama eeyga dhaqan xumo uu u badan yahay inuu waxyeelo u geysto ilmaha sababo la xiriira hogaamin la'aan. Hubso inaad tahay eeygan mid adag, kalsooni leh, oo iswaafaqsan hogaamiyaha xirmada si looga fogaado Cudurka Dog yar , bini-aadamku sababay dhibaatooyinka dhaqanka . Had iyo jeer xusuusnow, eeyadu waa harooyin, ee maaha dad . U hubso inaad la kulanto dareenkooda dabiiciga ah sida xayawaanka.
Dhererka: 11 - 13 inji (28 - 33 cm)
Miisaanka: 12 - 14 rodol (5 - 6 kg)
afka madow cur sawiro yar yar
Carlin Pinscher wuxuu ku fiican yahay nolosha guryaha. Waa mid aad u firfircoon gudaha gudihiisana wax caadi ah ayuu sameyn doonaa bilaa daarad la'aan. Carlin Pinscher waa in laga ilaaliyaa qabowga.
Eeyahaani uma baahna jimicsi badan laakiin waa inay ahaadaan socday maalin kasta si ay u gutaan dareenkooda asalka ah ee ay ku socdaan. Intaas waxaa sii dheer, waa in la siiyaa fursado joogto ah oo ay ku ordaan oo ku ciyaaraan. Hubso in daarad kasta oo ay ku furan karaan ay leedahay xayndaab dhererkiisu sarreeyo si looga hortago dadaalkooda go'an ee baxsashada iyo sahaminta.
Qiyaastii 6 ilaa 12 eey
Jaakada Carlin Pinscher ee jilicsan, gaaban, jaakad adag ayaa si fudud loo hagaajin karaa. Shanlo oo ku caday burush adag, shaambo oo keliya markii loo baahdo. Timaha dabacsan waxaa lagu saari karaa iyadoo lagu tirtiro maro diiran oo qoyan. Noocani waa celcelis daadiya.
Asal ahaan waxaa loo yaqaan 'Pug-Pin', noocani wuxuu ku bilaabmay iskutallaab u dhexeysa Guntin yar iyo Baabuur . Noocyada kale ee loo maleynayo inay gacan ka geysan doonaan nooca Carlin Pinscher ayaa ahaa, waxaana lagu soo bandhigayaa barkadda hiddo-wadaha sidoo kale. Magaca Carlin wuxuu ka yimid Baatuuka, sida wadamada qaar Pug loogu yaqaan Carlin. Waxaa la go'aansaday 1998 in la abuuro nooc cusub. Fikradda ayaa ka timid seddex saaxiib oo ka tirsan Grant Milionta. Magacyadoodu waxay kala ahaayeen Isabeau Morgan, Katushka Vitrichenko iyo Kawika Buenafe. Intii lagu jiray 1992 Faransiiska, Isabeau iyo Katushka waxay arkeen eeyo u eg Rottweilers yar. Mulkiilihii wuxuu u sheegay inay yihiin iskutallaab kharib iyo Tuugada Ciyaaraha Ingriiska. Magaalada Honolulu, Kawika waxa kale oo ay ku aragtay eey u eg Rottweiler toy ah. Kawika ayaa milkiilaha u sheegay in eygu yahay iskutallaabta Guntinta Guntiga Yar iyo Bugta. Waqti ka dib markii Kawika iyo Isabeau ay galeen fasax, waxay ka tageen horyaalkoodii Miniature Pinscher eey ah oo ay wada lahaayeen milkiilaha Pug madow. Markii ay ka soo laabteen fasaxoodii, waxay ogaadeen in eey tooda ah uu si kama 'ah u baashaalay Pugga madow. Saddex Ey ayaa dhashey, dhammaantoodna waxay u egyihiin Rottweilers yaryar. Dhamaan seddexdooda waa la hagaajiyay midna wuxuu aaday Grant Milionta. Eyga Grant waxaa loogu magac daray Snooz. Dad badan ayaa doonayay eey sida Snooz ah oo qof xitaa isku dayay inuu xado. Baadhitaan iyo qorsheyn badan ka dib, Grant wuxuu markaa go'aansaday inuu abuuro nooc cusub oo ku saleysan Snooz, oo ay weheliso caawinta Isabeau, Katushka, iyo Kawika. Waxaa la go'aamiyay in Gaduudka Yar ee Yar ee loo yaqaan 'Miniature Pinscher' ee loo isticmaali jiray soosaarka Snooz waa in loo adeegsadaa loona tarmaa Pugs madow. Digaagagga Dheddigga ayaa loo isticmaalay maxaa yeelay waxay caadaysteen inay yeeshaan arday waaweyn oo madax leh. Adiga oo adeegsanaya eeyahaas, dhammaan eeyaha eey dhashaan waxay lahaayeen jaakad madow iyo midab buluug ah, oo madow adag ay ku badan tahay Maanta Carlin Pinscher waxaa si taxaddar leh loogu soo xulay astaamo ay soo xusheen naadi hore oo ka kooban Grant, Isabeau (oo wali la shaqeyneysa Guntigeedii Yaryar), Katushka iyo Kawika (oo waliba wali lashaqeynaya Miniature Pinschers iyo korsashada Greyhound). Carlin Pinscher ma ahan eey saafi ah. Eyga saafiga ahi waa midka leh taariikh dukumiinti abtirsiinno ah - oo loo yaqaan abtirsiin — faracyo badan oo fara badan oo isku nooc ah. Waqtigan xaadirka ah Carlins badankood waxay leeyihiin hal ama laba jiil oo dukumiinti ah. Mustaqbalka dhow Carlin Pinscher waxaa lagu dabaqi doonaa kooxo kala duwan oo ah nooc soo koraya.
Kani waa Snooz. Lahaanshaha sawirka Carlin Pinscher Homepage
Snooz, sharaf leh bogga Carlin Pinscher Homepage
Qashin yar oo eyda Carlin Pinscher
Eeg tusaalooyin badan oo ah Carlin Pinscher
Sawirada Carlin Pinscher 1
min pin isku darka shaybaarka madow
sawirada chihuahua iyo dachshund mix
shaybaar cad iskudhaf retriever iskudhaf